Semalt: Inona ny Ratware? Ohatra azo avy amin'ny Ratware Mailout Messages
Ratware dia karazana mailaky ny spam izay mamorona, manamboatra ary mandefa malware amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy ny mailaka. Ity programa manokana ity dia ampiasain'ireo hackers sy mpitsikilo matihanina mba hameno ireo webmaster maro, bilaogera ary mpampiasa mailaka miaraka amin'ny mailaka mitebiteby. Ny tanjon'izy ireo dia ny hamoaka dokiman-kaontenera sy fitaovam-pananahana amin'ny alàlan'ny fitaovam-pananahana na fiezahana hampiantrano ireo mpiserasera amin'ny alàlan'ny mailaka fisintonana phishing.
Nanazava i Michael Brown, Semalt Manager Success Manager, fa matetika no mandiso na manodina ny adiresy imailaka loharano izay handefasana ilay spam indraindray. Ny adiresy diso diso dia matetika mametaka ny maha-ara-drariny ny olona, ​​frankjohn@microsoft.com. Ireo adiresy loharanom-baovao ireo dia famantarana fa nosamborin'ny mpanaratsy sy ny mpitsikilo matihanina ianao.
Ohatra avy amin'ny Ratware Mailout Messages:
Ny tena mampiavaka ny hafatra ratware dia:
Izahay no medikaly malaza sy orinasa pharmacie (famokarana fanafody);
Nahazo ny Insta-Kisses avy amin'i Selena Gomez ianao (hanangona ny fampahalalam-baovao saro-pady toy ny antsipirian'ny carte de crédit) ity (20 taona ity)
Te-hiresaka aminao amin'ny sarimihetsika mivantana (mametaka sary vetaveta sy fitaovana mora vidy) ny tovovavy Lesbian Steamy Hot
Lahatsary fitrandrahana 30 segondra maimaim-poana hita eto (ity no endrika fangalarana famantarana);
Mialà haingana ary mifandray amin'ny mpiara-dia aminao alohan'ny fahatarana (famonoana sy fanodinana mailaka izany);
Nahazo sary vaovao sy lahatsary vaovao 15 ianao (famandrihana famonoan-tena);
Aiza no misy anao na aiza ianao? (koa ny endrika fametavetana sary vetaveta);
Ny vidin-tsolika faran'izay sarobidy indrindra amin'ny iPad hita eto (famandrihana phishing);
Nahoana no zava-manahirana ny fandripahana?
Mipoitra matetika ny asa ratsy atao amin'ny fanaovana asa isan-karazany. Voalohany indrindra, mampifandray amin'ny serasera amin'ny Internet izany na fifandraisana manokana ary mandray ny rafitra mailakao maharitra. Faharoa, mandefa imailaka isan-karazany ho an'ny mpampiasa maro izy ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny fampiasana ordinatera. Fahatelo, manafoana ny fifandraisanao amin'ny Internet ianao mba hanatanterahana asa miafina an-tsokosoko. Fahefatra, averiny indroa na indroa isan'andro ny fihetsika ataony nefa tsy mampahafantatra anao fa ampiasaina amin'ny solosainao ny spam.
Aiza no misy ny adiresy mailaka
Namorona teknika isan-karazany ireo hackers sy mpilalao matihanina mba hiditra ao amin'ny ID ianao, ary hiezaka ny hangalatra ny angon-drakitrao manokana ary handefa ny volanao amin'ny banky amin'ny banky. Mampiditra viriosy / malware izy ireo amin'ny rafitrao na ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny mailaka diso. Amin'ny ankapobeny, ny rindranasa dia miditra amin'ny adiresy mailay amin'ny fomba efatra: lisitra voaangona, lisitry ny rakibolana, lisitra mainty hoditra, ary tsy manoratra lisitry ny lisitra.
Ahoana ny fanesorana ny ratware? Misy rindrambaiko hiatrehana izany?
Mampalahelo fa tsy mahita fitaovana manohitra ny fitaovam-piadiana ianao ao amin'ny aterineto satria malware mahery izy ireo ary tsy azo sakanana amin'ny programa na fitaovana mahazatra. Na izany aza, ny manam-pahaizana dia namorona vokatra sy fampiharana izay mihetsiketsika mihetsiketsika ary miantoka ny fiarovana anao. Ireo programa mpanohitra manohitra ireo dia amidy amin'ny vidiny sarobidy, eo anelanelan'ny antoko matanjaka ary tsy azo alaina ao amin'ny tranokala tsotra. Koa satria ny lalàna manohitra ny fifanintsanana dia ara-dalàna sy mila mangataka, mila mandoa vola avy amin'ny $ 100 ka hatramin'ny $ 5,000 ianao mba hahazoana ny fidirana ary hanafoana ny fitaovam-piadiana amin'ny lafiny iray Source .